Hupenyu-Sizi Jason Voorhees Akasungwa Kuzasi kweAZ Lake
musha	Horror Varaidzo Nhau	Hupenyu-Sizi Jason Voorhees Akasungwa Kuzasi kweAZ Lake
by Timothy Rawles Dai 13, 2022 16,180 maonero
Patiri kupemberera zuva reimwe yemazita anodiwa kwazvo emufirimu, takafunga kuti ungangofarira nyaya yemutambi Zachary Nagy akaisa Jason Voorhees pazasi peLake Pleasant, AZ., kaviri.
Nguva yadarika isu ndakakuudza nezvazvo chirongwa cheunyanzvi chehupenyu chakagadzirwa neimwe hoki-yakavharwa slasher inonzi Jason uyo akabviswa kubva pasi peLake Pleasant muArizona. Iyo nyaya inonyanya kuve yechokwadi, asi pakanga paine imwe twist yaungade kuifarira.
Sezvatakataura muzvinyorwa zvedu zvakapfuura, Nagy akaita chifananidzo ichi mukuremekedza kufa kwaJason mumvura. Chishanu Chishanu chikamu chechipiri. Iyo lakebed diorama inosanganisirawo chikwangwani chemugwagwa chinoti "Crystal Lake."
Iyo yekudyira nharaunda yaifunga kuti zano raive rakanaka uye ngano yakazvarwa. Izvo zvakange zvisati zvaitika kusvikira mavhidhiyo aonekwa paReddit yefomu yepasi pemvura kuti zvinhu zvikaoma; dhipatimendi remapaki eArizona rakaona vhidhiyo uye nekudaro vakatanga basa ravo rekubvisa.
Asi apa ndipo pakatanga kushata. Chinyorwa chedu chekutanga chinoti chifananidzo chakabviswa, asi Nagy, muhurukuro ye2018 yeSlasher Radio, anoti kwete, achiripo, masutu haasati amuwana.
Muchokwadi, muimbi akati akatamisa "mutumbi" mushure mekunge Lake Pleasant yaputswa.
"Vakadzikisa dhamu pasi kupfuura zvavaimboita, gore rino," akadaro Nagy muhurukuro panguva iyoyo. "Saka takazopedzisira tava kumufambisa semwedzi miviri mukati, saka munhu wese akafunga kuti Jason angonyangarika kwechinguva chidiki….akadzika kusvika pamamita makumi maviri emvura uye isu takafanana ngatimudzorere kumakumi matanhatu [mamita pasi. ].”
Parizvino, zvinoita sekunge, Jason achiri pazasi pegungwa pane imwe nzvimbo uye vatorwa vanogona kumushanyira kana vachiziva kwekutarisa, asi Nagy hapana chaanopa.
"Iri kuLake Pleasant, asi nzvimbo yacho handisi kuzokuudza," akadaro. Ngatitarisirei kuti Mulder wannabees kuArizona Parks department havana kubudirira muchinangwa chavo chekudzora VaVoorhees.
Slasher Radio inoti ivo vari kutsigira musiki waJason nechikumbiro kurwira kuchengetedza chifananidzo chakavanzika pazasi peLake Pleasant.
Unogona kuteerera kubvunzurudzo yose pazasi.